ဗဟုသုတများ - Oxygen Myanmar
ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်သော အသိပညာများစွာကို ဒီစာမျက်နှာမှာလေ့လာပါ။
အဆုတ်ကို အားကောင်းစေပြီး မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်လို့ရတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်း(၅)မျိုး
အဆုတ်ကို အားကောင်းစေပြီး မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်လို့ရတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်း(၅)မျိုး •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ၁။ ရေနွေးငွေ့ ရှုခြင်း ============ ရေနွေးငွေ့ရှူခြင်းသည်အဆုတ်လမ်းကြောင်းကိုပွင့်စေပြီးချွဲများကိုပျော်စေပါတယ်။အဆုတ်မကောင်းသောသူများသည် အေးသောအချိန် သို့မဟုတ်ပူသောအချိန် မိမိ၏ အဆုတ်လက္ခဏာများ ပိုဆိုးတတ်လာကြောင်း သတိပြုမိတတ်ပါမည်။ရာသီဥတု အပြောင့်လဲကြောင့် အဆုတ်တွင် ချွဲစို့တတ်ပါတယ်။ရေနွေးငွေ့သည်လေကို စိုစွတ်စေပြီး ချွဲများကို ပျော်ဝင်လွယ်စေပါတယ်။ရေနွေးငွေ့ရှူခြင်းဖြင့်ချွဲပိတ်ခြင်းကိုချက်ချင်းသက်သာကာ အသက်ရှူခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေသည်။လေ့လာချက်အရ လေပြွန်ကျဥ်းလူနာများ အနက်မှ ရေးနွေးငွေ့ရှူသော လူနာများသည် သိသာစွာအသက်ရှူနှုန်း နှင့် နှလုံးခုန်နှုန်း ထိန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ ၂။ အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်း ================ ပုံမှန် အသက်ရှူတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အသက်ကို ဝမ်းဗိုက်ထဲထိရောက်အောင် ရှူရတာပါ။ ရင်ဝမ်းခြားမြှေး ကြွက်သားကို ကျုံ့ဆန့်ပေးပြီး သန်မာလာစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ဆိုရင် အရင်ဆုံး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင် ပက်လက်လှဲလိုက်ပါ။ […]
ကိုဗစ်လူနာများအတွက် အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း ၁။ ဘယ်လိုလူတွေ လုပ်သင့်လဲ – အသက်ရှုရခက်ခဲပြီး မောနေတဲ့သူတွေ – သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ဓာတ် ၉၄%အောက် ရောက်နေတဲ့သူတွေ ၂။ ဘယ်လိုလူတွေ မလုပ်သင့်ဘူးလဲ။ – ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ – နှလုံးရောဂါအခံရှိသူတွေ – ပေါင်ရိုး(သို့)တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးထားတဲ့လူနာတွေ ၃။ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ – ခေါင်းအုံး‌ ၄-၅လုံးခန့် ၄။ ပြုလုပ်ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်း – လေ့ကျင့်ခန်းအနေအထားတခုကို အလွန်ဆုံး မိနစ်သုံးဆယ်ခန့်သာ ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ (က) မှောက်လျက်အနေအထား – လည်ပင်းအောက်တွင် ခေါင်းအုံးတလုံး – ရင်ဘတ်အောက်နှင့် ပေါင်ရင်းအောက်တွင် ခေါင်းအုံးတလုံး – ခြေသလုံးအောက်တွင် ခေါင်းအုံးနှစ်လုံးထားပါ။ – လေကို ရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်ပါ။ (ခ) ညာဘက်စောင်းအနေအထား – သက်သောင့်သက်သာအနေအထားဖြင့် ညာဘက်သို့စောင်း၍ လှဲပြီး […]
အောက်ဆီဂျင်အိုးပေါ်က ခေါင်းတွေရဲ့ သတိထားစရာအချက်များ
စျေးကွက်ထဲတွင် အတွေ့အများဆုံး Flowmeter များမှာ အပြင်ရစ်အိုးများအတွက် အသင့်သုံးနိုင်တဲ့ခေါင်းအမျိုးအစားများနဲ့ လာပါတယ်။ 27 ဂွ နဲ့ အိုးဆက်ခေါင်းနေရာကို ကြပ်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။ အတွင်းရစ်/အပြင်ရစ်ပြောင်း adaptor များအား စက်မှုပစ္စည်းဆိုင်များတွင် အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
အိမ်မှာ အောက်စီဂျင် ဘယ်လို ပေးကြမလဲ ဘယ်သူတွေကို ပေးမလဲ ————————– မပြင်းထန်သောကိုဗစ်- အောက်စီဂျင် မလိုပါ အတော်အသင့်ပြင်းထန်သော ကိုဗစ်တချို့နှင့် အပြင်းစားကိုဗစ်- အောက်စီဂျင် လိုပါသည်…. ပေးသင့်သော အချိန် ———————– အသက်ရှုနှုန်း ၂၄/ မိနစ် ထက်ကျော်လျှင် Pulse Oxymeter အဖြေ <92 (ယခင်က အဆုတ်ရောဂါရှိသူများတွင် နဂိုထဲက နည်းနေတတ်ပါသည်) အသက်ရှုရခက်လျှင်၊ လှုပ်ရှားတာနဲ့မောလျှင် ပေးရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ——————————– Pulse Oxymeter O2 cylinder ပစ္စည်းစုံ(သို့မဟုတ်) O2 Concentrator Nasal Prong Face Mask (လိုအပ်လျှင်) ဘယ်လောက်ခံမလဲ..ဘယ်လိုပေး မလဲ ————————————– 10 Lit Cylinder – ခေါင်းလုံပြီး စံနစ်တကျ […]
Humidifier ရေဘူးဟာ လူနာနှာခေါင်းထဲ အောက်စီဂျင်လေများကြောင့် ခြောက်သွေ့မသွားစေရန် ရေငွေ့ပေးဖြတ်စေရန် ရေသန့်အနည်းငယ်ထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအကြောင်းနဲ့ အောက်စီဂျင်ပေးဖို့လိုလာပါက ရေမဖြည့်ပဲ ဆက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ရေဘူးကို ရေအပြည့်လုံး၀*** မဖြည့် ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
CoVID-19 နှင့် Antibiotics
SpO2 90%‌ အောက်ကျပြီး အောက်စီဂျင်မရသေးမီအချိန်မှာ လုပ်ဆောင်သင့်တာလေးပါ။ ……………………………………………….. Dr. Kaung Myat ယခုလတ်တလော COVID -19 ရောဂါကြောင့် အမောဖေါက်ပီးအောက်စီဂျင်မရကြသောလူနာများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အောက်စီဂျင်လည်းမရှိ ၊ ဆေးရုံလည်း တက်လို့ အရမ်းခက်တာကြောင့် အိမ်မှာမောရင်း သေဆုံးကြရတဲ့ လူနာတွေ လျော့ကျစေရန် အလို့ငှာ စေတနာဖြင့် ဤစာကို ရေးသားအပ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး အသိပေးလိုသည်မှာ COVID ရောဂါဖြစ်သူတိုင်း Oxygen မလိုပါ။ ရောဂါဖြစ်သူအားလုံး၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ oxygen လိုအပ်ပါသည်။ ဒုတိယ အသိပေးလိုသည်မှာ COVID ရောဂါဖြစ်သူတိုင်းမသေပါ။ လူနာစုစုပေါင်း၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ သေဆုံးပါသည်။ အမောဖောက်လူနာအားပြုစုဖို့အောက်ပါအချက်များကိုနားလည်ထားရပါမည်။ အမောဖောက်ခြင်းသည် အကြောင်း ၂ ချက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ A. ခန္ဓာကိုယ်သို့ […]
ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက် ‘မှောက်’ ပီး နောက်ထပ်ထိရောက်တဲ့ အရာကတော့ ‘ပုတ်’ ပေးတာပါ။ ဒါကို ဆေးပညာအရ “Percussion” လို့ခေါ်ပါတယ် Percussion ပုတ်တာဟာ Chest Physio Techniques တွေထဲက Manual technique တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။Airway Clearance Chest Physio Technique တွေထဲက ကိုဗစ်အတွက် လက်တွေ့မှာ အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အလိုအပ်ဆုံးက Percussion နဲ့ vibration ပါ။ကိုဗစ်လူနာအများစုက ချောင်းခြောက်ဆိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက် huffing တို့ coughing တို့ အဲ့လောက်မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ချွဲသလိပ်တွေ ထွက်တာမရှိသလောက်ပါပဲ။ ချွဲပါခဲ့ရင်လည်း အခုပြောပြမယ့် ပုတ်တဲ့နည်းကို သုံးလို့ရပါတယ်။ ပုတ်ပေးရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က မောလို့ကုတင်ပေါ်မှာ မလှုပ်မရှားဘဲ နေတာကြာတာဖြစ်စေ ချွဲသလိပ်တွေထွက်အောင်ဖြစ်စေ အဆုတ်ထဲက လေအိတ်တွေအောက်ဆီဂျင် အလုံအလောက်မရတော့လို့ လေအိတ်တွေကပ်ပီး […]